TAORIAN’NY namonoan’i Davida an’i Goliata, dia nentin’i Abnera komandin’ny miaramila teo amin’ny Israely ho any amin’i Saoly izy. Nankasitrahan’i Saoly aoka izany i Davida. Nataon’i Saoly filoha tao amin’ny tafiny izy ary noraisiny mba hipetraka tao amin’ny tranon’ny mpanjaka.
Tatỳ aoriana, rehefa niverina avy niady tamin’ny Filistinina ny tafika, dia nihira toy izao ny vehivavy: ‘I Saoly nahafaty arivoarivo; fa i Davida nahafaty alinalina.’ Nahatonga an’i Saoly hialona izany, satria nomena voninahitra bebe kokoa noho i Saoly i Davida. Nefa tsy mba nialona i Jonatana zanakalahin’i Saoly. Tiany aoka izany i Davida, ary i Davida koa dia tia an’i Jonatana. Koa dia nanao fifanekena izy roa ireo fa ho mpisakaiza hatrany hatrany.
Nahay nitendry harpa tsara tokoa i Davida, ary tian’i Saoly ny mozika nolalaoviny. Indray andro anefa ny fialonan’i Saoly dia nitarika azy hanao zavatra nahatsiravina. Raha mbola nitendry harpa i Davida, dia nandray ny lefony i Saoly ary natorany izany, sady nilaza izy hoe: ‘Hafantsiko eo amin’ny rindrina i Davida!’ Nefa nihilana i Davida ary tsy nahavoa azy ilay lefona. Fantatr’i Davida àry izao fa tena tokony hitandrina izy.
Iny alina iny i Davida dia nandeha ho any an-tranony. Nefa naniraka lehilahy sasany i Saoly mba hamono azy. Fantatr’i Mikala izay nokasain-drainy hatao. Koa hoy izy tamin’ny vadiny: ‘Raha tsy mandositra ianao anio alina, dia ho faty rahampitso.’ Tamin’iny alina iny i Mikala dia nanampy an’i Davida mba handositra avy eo amin’ny varavarankely iray. Nandritra ny fito taona teo ho eo i Davida dia tsy maintsy niafina nifindrafindra toerana mba tsy hahitan’i Saoly azy.
Hizara Hizara Nahoana i Davida no Tsy Maintsy Nandositra
my tant. 59